“Dia gaga elà…” - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Firy ny isan’ny kandida ? Sarotra ny mahazo ny vaovao amin’ny antsipiriany ho an’ireo kaominina miisa 1693 manerana ny Nosy. Ireo tanan-dehibe ary izay malazalaza ihany no mbola nandrenesana anarana. Toa an’Antananarivo izany sy ireo renivohi-paritany dimy hafa (faritany teo aloha). Eo koa ny fisian’ny kandida tombanana ho matanjaka na malaza na efa mpiserasera amin’ny mpilaza vaovao. “Dia gaga elà…” araka ny fiteny malaza fampiasan’ilay vehivavy iray izay lasa kandida ankehitriny.
“Dia gaga elà…” fa misy kaominina heverina fa kely fa saingy miverina matetika ny anaran’ilay kaominina sy ilay kandida iray ao amin’izany kaominina izany. Ary fampitam-baovao maromaro no miara-misalahy mampita ny vaovao ao amin’izany kaominina izany. Propagandy alohan’ny fotoana ve ? Sa izao no tonga amin’ny kivazivazy manao hoe : “misy ny andraim-by fa misy koa ny andraim-baovao” ! “Tahaka ny hita eny amin’ny rehetra eny kosa io e, jereo na samy mpivarotra izao aza eo amin’ny fokontaninao eo dia misy ny mahasarika olona ary olona izay mifanosika handoa vola fa ao kosa ny toeram-pivarotana sasany zary manosika olona hiverina” hoy ity mpanao politika nambara fa matetika hita amin’ny fampitam-baovao ity no sady nitsiky izy. Misy traboina tamin’ireny rivodoza sy orambe ireny, izy tonga alohan’ny Bngrc. Misy fako miavosa mila esorina, tonga alohan’ny Samva Ranamana. Misy tetezana amboarina, indro fa efa eo alohan’ny Travaux Publics Sakaiza. “Dia gaga elà…” “Tsy propagandy alohan’ny lera akory ny azy” hoy ireo mpanara-dia azy fa fandraisana andraikitra.
“Dia gaga elà…” tena tanteraka ara-bakiteny io. Gaga ny tena nijery tamin’ireo televiziona fa tonga nijery baolina lavalava ireo kandida sasany tao Antananarivo Renivohitra tao. Azo antoka anefa fa misy dia tsy mahalala akory ny antsoina baolina maty nenti-tanana na essai (fa tsy andrana akory !). Tsy mahafantatra akory fa maty ilay baolina nodakana ary tafiditra anelanelan’ny haitso (H). Tsy afaka ny hanavaka ny baolina maty tamin’ny drop sy ny maty hors-jeu ary ny transformation. Na manoratra ny maul aza izao mety hanahirana. Fa mety hisy hamaly hoe “angaha koa moa izany tena ilaina raha hitantana kaominina e ?” Dia hoy aho mamaly hoe : “tsy ilaina koa mandany fotoana ety Mahamasina”. “Dia gaga elà…”
Rehefa mahita an’ireo mpanao politika manao bemidina tahaka izao dia mila hanao ny tena : “aleo ho amin’ny fotoam-pahavaratra no hanaovana ny propagandy rehefa fifidianana kaominaly”. Eo no tena mahita ny fahavoazan’ny olona anie ireo kandida e. Ho hita eo izay sahy miosona miaraka amin’ny vahoaka. “Dia gaga elà…” fa ho vitsy angamba ny fitsidihana fokontany raha fahavaratra no hanaovana ny propagandy.
Fa isan’ny nahagaga ihany koa ny nandre ny fanazavana fa nikasa hilatsaka ho ben’ny tanàna indray i Andry Nirina Rajoelina fa nihemotra tamin’ny segondra farany. “Nihemotra izahay rehefa nahita fa misy be loatra ny tsy fanarahan-dalàna” hoy ireo mpitondra teny. “Dia gaga elà…” mahita fa nirotsaka anefa ireo heverina fa mahery loha ao amin’ny Tgv tahaka an’i Christine Razanamahasoa izany. “Dia gaga elà…” fa angaha samy hafa hono ny lalàna mifehy ny fifidianana any antanàna (Fianarantsoa io) sy ny ao Antananarivo ? Sa mahery loha kokoa ramatoa ? Sao kosa antony hafa ? Sao mbola mipetraka ilay “ni…ni” ?
Maro ny zava-mahagaga amin’izao fifidianana izao fa samia velon’aina hijery izay kandida ho lany na tsy misy sary aza. Tahaka ny any amin’ny facebook ihany io. Tsisy sary ilay profil fa fantatrao foana fa ilay namanao io na ilay tsy namanao. Tsy mahagaga ange izany fa rehefa namana dia fantatra foana e…